Tsy misy fomba seminera, amin’ny PowerPoint, toro-hevitra sy ny anjara-milalao ao anatin’ny vondrona lehibe. Fa tsy, afa-tsy ireo mpandray anjara, ny Vaovao sy ny olona hiasa amin’ny vahaolana ny olana. Tsy very maina ny fotoana psycho ramblings na ny fanta-daza momba ny foto-kevitra. Fa samy hafa tanteraka ny fomba ny Olana. Tsy mifandray ampy aoka seminera, dia afaka manimba ny aina. Fa tsy, be Fanazaran-tena sy mafy ara-tsaina miasa izy ireo, dia hitombo sy tsy be olona. Tsy misy efitra ho an’ny foto-pisainana adihevitra, Fampahafantarana ny ady na hiresaka-show blah-Blah. Fa ny tena manokana rivotry ny fanekena, ny fisokafana ary ny Vazivazy. Misy be dia be ny aina buffet amin’ny dimy ambin’ny folo karazana dite sy ny mofo voasesika. Fa Tsy Ny Kafe, Dite, Rano. Sakafo antoandro amin’ny trano Fisakafoanana. Tsy misy Seminera, izay tsy fantatrao rehefa afaka izany, inona no azonao atao amin’ny fomba hafa ankehitriny. Fa tena nangataka ny famindrana ny asa, vondrona fianarana ary, ao amin’ny fangatahana, an-telefaonina-Coaching ahy. Tsy vondrona lehibe iray izay misy amin’ny ankehitriny sy ny hafa koa ny fahanginana. Fa ny vondrona kely ao izay mahatsapa fa ny hafa ihany koa, ary misokatra tsikelikely. Isaky ny zaridaina dia tsy rakotry ny fotoana, raha nikarakara ny fotoana ela izy. Izany dia mihatra amin’ny saha-pitiavana ihany koa. Fa inona no tena zezika ho an’ny fitomboana ary be dia Be ny voninkazo ao amin’ny fiaraha-miasa. Ny fanambadiana dia ny miezaka ny hamaha ny olana ianareo roa dia tsy irery Woody Allen natao. Dia toy izany no izy, toy ny maneso, ny didim-pitsarana tamin’ny voalohany dia mety ho toa, be dia be ny Fahamarinana dia mitoetra ao anatiny. Satria tsy misy Fifandraisana hafa noho ny fiaraha-miasa fatorana dia miankina amin’ny tsirairay. Tsy afa-tsy ny fitiavana, nefa ihany koa ara-bola ny Fandaminana, ny ankizy, ary niara-nanao ny fiainana fanapahan-kevitra momba ny toeram-ponenana, ny fomba fiainan’ny, inter alia, ny mamorona akaiky fatorana. Izany dia tokony ho heverina ny mahafa-po fatorana ary tsy ho toy ny constricting kitrokeliny no miaina, tsy maintsy hiresaka be dia be amin’ny tsirairay sy hifampiraharaha. Indrisy, ny lehilahy sy ny vehivavy no tanteraka amin’ny fomba fijery samy hafa mba hiresaka ny momba ny fifandraisana. Mihevitra ny vehivavy: raha mbola azontsika atao ny miresaka momba ny zava-drehetra, na dia ny olana sarotra, raha mbola ny fifandraisana eo amin’ny order. Lehilahy amin’ny lafiny iray hafa: Raha tokony Hiresaka momba ny zavatra sy ny zava-drehetra, dia inona no diso eo amin’ny fifandraisana. Ao amin’ny fanjakan-Dehilahy na matriarchal fifandraisana izay dia mora kokoa. Ny lehilahy na ny vehivavy, ny sasany, tsy maintsy ho atao. Dia nanontany ny antony, tsy maintsy, satria hoy izaho izany na Noho izaho tsy maintsy ampy ny vola an-trano mba hitondra. Ao anatin’ny fiaraha-miasa amin’ny fifandraisana, dia tsy manana zo bebe kokoa noho ny hafa. Na dia mitovy ary koa no mba hifampiraharaha be sy ny mba hahitana vahaolana fa samy afaka ny ho velona amin’ny. Ohatrinona ny mba ilaina, na, raha ny Korontana manomboka. Ahoana no mandany vola ary hatraiza. Raha ny zanakao no Nutella avela hohaniny, ary na tsia Tofu dia tsara kokoa noho ny Schnitzel. Fa raha olona iray no nanala ireo rehetra ireo fandaminana olana eo amin’ny ara-drariny mahafa-po, mitoetra ny olana lehibe misokatra: ny mpivady fifandraisana mihitsy. Ao amin’ny infatuation dingana ny fanatonana sy ny fifandraisana akaiky ny irery hitsangana rehefa samy hahita. Rehefa afaka taona vitsivitsy, izany dia tsy mitovy. Avy eo, ny maka sary akaiky sy ny fiaraha-fiankinan-doha afaka ady mafy sy lavitra. Fa ahoana no mety tsara toy izany ny fifandraisana mba ho fahombiazana. Ao amin’ny bilaogy lahatsoratra nosoratan’i Barrie Davenport, aho namaky ny efa-polo fanontaniana. Aho mahita azy ireo ka tsara fa dia nadika fotsiny ho anao manana. Rehefa tonga an-trano avy amin’ny asa, inona no tianao fa, inona aho nanao tamin’ny voalohany minitra vitsy na atao. Ahoana no ahafahantsika manome antsika izay ilaintsika, raha te ho ao anatin’ny iray andro isan-karazany ny zavatra. Inona no samy hafa toetra isika, ny olana eo amintsika. Inona no fiteny ny feoko na ny fomba fifandraisana mahatonga Anao tsy mandany fotoana miaraka amiko. Inona moa ve Ianao vonona ny miaraka amiko na ho ahy mba tsy hanao inona Ianao no teo aloha ny fifandraisana. Tsaroanareo angamba rehefa mamaky ianao. Inona no tena mahaliana dia mba handinika, alohan’ny miresaka amin’ny havanao momba na tsy fantatro, inona no mety ho valiny ny mpiara-miasa na Mpiara-miasa. Tsy misy fanontaniana izay afaka hifanakalo hevitra eo am-baravarana sy ny Anjely. Ary na dia ny Mpiara-miasa dia reraka fotsiny ary nanamafy avy miasa. Izany dia tsaratsara kokoa ny hitondra ny fotoana. Angamba ao anatin’ny fenitra ny fifanakalozan-kevitra, satria aho maromaro izany, ny ny fifandraisana, na ny hampitombo te hanazava, faly ny fahazoan-dalana. Eto dia ny tena fomba Ho ny mpiara-miombon’antoka na mpivady ny olana, dia nanao ny Webinar. Izany dia maimaim-poana amin’ny Aterineto Seminera mba hisoratra anarana, ianao dia afaka ary tena ilaina ny faniriana ho an’ny mpivady hahazo ny fiainana. Avy eo dia tonga ny Fiainana-Coaching miaraka amiko mba Heidelberg. Misy, hanampy anao aho mba hamantarana ny fiainana amin’ny foto-kevitra, izay dia ho voampanga ny fifandraisana, sy ny fanovana. PS: Raha tianao lahatsoratra ity tia, dia miteny io ianao, azafady: ao amin’ny Facebook, Twitter, na amin’ny alalan’ny Mailaka. na manorata fanehoan-kevitra. na hanoratra ny lahatsoratra vaovao amin’ny alalan’ny Email na RSS. Satria maro ny mpamaky dia ho tonga manerana ity lahatsoratra voalohany ao amin’ny ahy manokana Bilaogy, ireto misy vitsivitsy hafa malaza andinin-teny manomboka amin’ny: fifandraisana, famantarana ny krizy, fifandraisana krizy, Valiny, fifandraisana krizy, Manaiky, ny Fifandraisana olana, fifandraisana krizy, fampielezam-peo, ny fifandraisana krizy, izay Manampy Amin’ny fitondran-tena Fifandraisana olana, fifandraisana krizy, Mandresy, fifandraisana krizy, Andeha na Hijanona, fifandraisana krizy, fitsaboana roa, ny fifandraisana krizy, fifandraisana krizy, fisarahana, fifandraisana krizy soso-kevitra, fifandraisana krizy, mba hanao Inona, ny fifandraisana lalina ny krizy, fifandraisana krizy, fifandraisana krizy, fitondran-tena, ny fifandraisana krizy, fifandraisana krizy, Izay tokony hatao, ny fifandraisana krizy dia Manampy Izay vaovao irery ihany no manao na inona na inona. Izany ihany rehefa mampihatra ny toro-hevitra sy ny fomba, manova zavatra. Io no tombon-dahiny ny boky mpitari-dalana. Ao ny e-mail ny taranja hafa. Isaky ny andro vitsivitsy dia hahazo E-Mail amin’ny PDF ny pejy vitsivitsy izy — sy ny fampiharana asa. Ary ianao handeha mora kokoa. Satria fantany fa ao ny andro vitsivitsy, ny manaraka Mailaka avy. Amin’izao fotoana, dia tsy maintsy mieritreritra foana ny Tantra Fanorana fiofanana. Tsy mahalala ny voka-dratsy, Tantra sy ny hery ny vatana. Raha toa ka mpivady te-samy hafa sy ny vatana ny hafa mba hahatakatra, avy eo dia nisy Tantra Fanorana fiofanana dia azo antoka fa mahasoa. Ny sipa, ary izaho dia miaina amin’izao fotoana izao amina lavitra fifandraisana sy ny te-hampiasa ny fanontaniana mba ho fantatra tsaratsara kokoa antsika (amin’ny alalan’ny Mailaka). Manontany ny fanontaniana mba hahafantatra ny zavatra ianao mieritreritra, izaho koa nihevitra hoe inona no nahatonga azy dia milaza ianao. Hi Susanne, tiako anao fa ny elektronika laha-tahiry avy amin’ny fanangonana fa ela loatra. Ary marina ianao, ampahany amin’ny fanontaniana dia, noho izany, tsy fanatsarana ny fiainana ara-nofo ho an’ny maro hafa ny fifandraisana. Ny fanontaniana dia tena lalina, any amin’ny Toerana sasany, sy handeha am-Bifotsy. Vitsivitsy, ry namana dia hirotsaka aminao, ary izaho te hahalala izay ny tatitra avy eo. Raha ho ahy, handeha aho mba hanahaka ahy ianareo, mba elektronika fampirimana, tsy pack, mba hanangona ny vovoka, dia tokony ho afaka hampihatra azy ireo mandrakizay amin ity fiainana ity. Fa avy eo, aho tena tsara fitaovana Oh zavatra iray hafa, ity Ny fanontaniana dia indraindray kely ny farany Endrika ho an’ny maro ny fifandraisana hafa, ary tsy afaka mampiasa prima nandritra ny fiofanana, raha ny tena-sary hafa-sary fandinihana. Ary koa ho an’ny olona iray coaching fivoriana izay aho dia hypothetically afaka miasa. Misaotra anao noho ny manan-danja ny Bilaogy maro sarobidy faniriana ho ahy.
SA Eny, izaho sy ny vadiko efa nanandrana ny folo voalohany fanontaniana. Hatramin’ny androany Maraina aho mitady trano vaovao.
Eny, ny sasany ny fanontaniana izay nanontany izahay hoe samy hafa, ary talanjona izay efa nihaona taorian’ny taona maro, mbola Vaovao ny tsirairay. Maro fisaorana noho ny mampientam-po ny lahatsoratra sy ny Fandikana ny fifandraisana fanontaniana tena. Efa nanandrana ny fanontaniana ary inona no vokatr’izany. Mba hamaly ny matoantenin’ny atao-fitondran-tena mahery setra mahazatra ny olona maro. Inona no tena ao ambadika. Sy ny fomba hamantarana ny fitondran-tena toy izany amin’ny dingana iray tany am-boalohany. Ny voalohany fifandraisana amin’ny mba hanoratra vaovao Momba ny fahatoranana sy ny mety fihetseham-po, dia mampidi-doza. Satria tsy mifanaraka amin ny fanahy ny fotoana, ny voninahitra, ny marimarina kokoa, ny maha-mety tsy manam-petra. Ahoana ny hafatra momba ny fototarazo mampiseho ny farany Izy. Na raha toa aho teo afovoany izany, aho tsy ny iray mba hanaovana izany, dia ny mpanjifa ny fehezanteny voalohany ny Coaching. Ity didim-pitsarana ity nanao ahy hipetraka sy handray an-tsoratra, satria efa namaky ny taona lasa izay, ny fianarana, toy ny obsessive eritreritra, soritry ny obsessive-compulsive korontana. Ny ankamaroany dia mihodina manodidina Intrusive hevitra, mampatahotra hevitra, na mahery setra faniriana manoloana ny tenany na ny hafa. Ireo manao ny eritreritra dia afaka manao ny fanahiana, ary ny fisalasalana. Anisan’ny ratsy indrindra ny eny an-toerana, isika dia mianatra ny fitiavan-tena ilany ny olona tena haingana: ny fiara mpamily, ny jostling eo amin’ny lalambe sy ny jiro. Ny mpitaingina bisikileta izay foana tsy nisy fitsipika ny lalana. Aro-fanina ny mpandeha, izay obsessive-compulsive korontana mahazatra, mitaiza, ary maharitra ny fikorontanana ara-tsaina izay olona tsy voafehy, — tsaiko ny eritreritra (tafahoatra) sy ny fitondran-tena (compulsions), sy ny faniriana, ianao foana Izay seminera ny marina.
Fomba na toetra seminera
Ary izay manolotra ny fitoriana atao ankehitriny noho izany ny mpiasa tsara indrindra. Coaching mety tsy ho mihitsy tsara kokoa noho ny Seminera. Miaraka ireo fanontaniana ireo, Satria isika dia tsy afaka ny fanaraha-maso ny zavatra, isika dia tokony hatoky tena kokoa.»Matahotra aho, satria tsaroako, ny fiaramanidina aho ary noho izany dia nandeha teo aloha.»hoy ny Marary.»Ary nahoana ianao no I. asa maro fiovana ao aoriako, mpanazatra ny olona, ny entry-level tetikasa amin’ny tontolo matihanina. Tsindrio eto mba hamaky ny traikefa ary inona no zavatra telo tsy tokony hanaovana izany
← Mitady ny soulmate? Vehivavy rosiana te hihaona aminao koa. - YouTube-ny
Ny ankizivavy ao amin'ny Omegle na Chatroulette - Video Mampiaraka USA →